Nagarik News - काली दमिनीदेखि रूपासम्म
Monday 17 Jestha, 2073 | Menu	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज	शुक्रबार	राजनीतिअर्थसमाजकलाखेलविश्वप्रवासप्रविधिस्वास्थ्यविचारअन्तर्वार्ताब्लगहोमपेज
होमपेज / शुक्रबार / काली दमिनीदेखि रूपासम्म
काली दमिनीदेखि रूपासम्म	16 May 2013 बिहीबार २ जेष्ठ, २०७०
धनबहादुर खड्का Be the first to comment! 12345 (1 Vote)
ललितपुरको झम्सिखेलस्थित मोक्ष रेस्टुरेन्टमा सोमवार दिया मास्के आँखामा कालो चस्मा, बुट्टेदार सर्ट्स र कालो पारदर्शी लेगिंग्समा प्रकट भइन्। 'म काली दमिनीलाई भेट्न आएको!' उनको गेटअप हेरेर ठट्यौलो शैलीमा मैले भनेँ। उनले मुसुक्क हाँस्दै उत्तर दिइन्, 'यो पर्वतको खौलागाउँ होइन, ललितपुरको झम्सिखेल हो। यहाँ त रूपामात्रै भेट्नुहुन्छ।' झन् कन्फ्युज्ड बनाइदिइन् उनले। रेस्टुरेन्टमा एक्ली केटी मान्छे देखिन्छिन् उनी। सोध्नैपर्ने भयो, 'रूपा भनेको चाहिँ को नि?' पहिल्यै 'पात्र संवाद' गर्ने तय भएकाले उनी पात्रमा प्रवेश गरिसकिछिन्। 'उसलाई तपाईंले चिन्ने बेला भएको छैन र मलाई चिनाउने अधिकार पनि प्राप्त छैन। छोटोमा भन्दा यो शहरकी एउटा आधुनिक युवती हो, त्यो। फिल्म 'फिट्किरी'मा छे।''यो पहिरन रूपाको सिको होला?'उनले अब्जेक्सन जनाइन्, 'होइन, सी इज मोर द्यान मोडर्न। माथि क्लिभेज देखिने र तल छोटो स्कर्ट लगाउने मोडर्न होइन। चालढंग मोडर्न भएकी युवती हो रूपा। उसलाई मोडर्न हुने बाध्यता छ। मसँग उमेरमात्रै मिल्छ।''टेलिफिल्म 'दलन'की काली दमिनी चाहिँ आमा उमेरकी होली!' तुरुन्तै जवाफ फर्काइन्, 'अहिले भइहोली ! मैले छाड्दा ४० वर्षकी थिई।' पर्वतको खौलागाउँमा दिया युवती कालीदेखि ४० वर्षे कालीसम्म भइन्। चार महिनामा २५ वर्ष काट्नु, उमेरको वृद्धिसँग हाउभाउ परिवर्तन गर्दै लैजानु र काठमाडौँको नेवार युवतीले पश्चिमी लबजमा बोल्नु कम्ता गाह्रो थिएन। पात्रसँग नजिकिन उनले त्यो गाउँमा अनेक थोक गरिन्। त्यहाँका महिलासँग सँगै हिँडिन्, खाइन्, बसिन् र अनुहारसमेत डढाएर कालै पारिन्। 'पात्रको हाउभाउ आएन भन्ने लाग्नेबित्तिकै पानी खाने निहँुले घरघर चहार्थें,' उनले स्मरण गरिन्। लामो कार्यशाला, अभिनय गुरुसँगको अभिनय र पात्रमा ढाल्ने टि्रकले उनलाई काली हुन गाह्रो भएन। काली भएपछि गाह्रो भयो। 'सबैभन्दा गाह्रो?' उनले भनिन्, 'लभ गर्न।' हल गोरुसँगै उकालो लागिरहेको श्रीमान्सँग भारी बोकेकै अवस्थामा आँखा जुधाउनुपर्ने दृश्य दिन गाह्रो परेछ उनलाई। 'पात्रमा डुब्दै श्रीमान्सँग आँखा जुधाउँ्क भनेको मैले त गुरु अनुप बराल पो देखेँ, लाज लाग्यो। आँखा जुधाउनै सकिनँ। कति बेला यो सिन सकिएला जस्तो भयो,' उनले भनिन्। भर्खर ब्याचलर लेभलको पढाइ सकेर फुर्सदलाई उपयोग गर्न काली दमिनी भएकी थिइन् उनी। त्योभन्दा अघि एउटा सिरियलमा काम गरेकी थिइन्, 'सुखदुःखका कथा।' त्यो सिरियलले उनलाई यति दुःखी बनायो कि 'यो अभिनय भन्ने कुरा जिन्दगीमा गर्दिनँ' भनेर भागेकी थिइन्। तर, काली दमिनीले उनलाई छाडिन। डोटीमा पुग्दा त्यहाँका महिलाले आफ्नै दिदीबहिनी सम्झेर अँगालो हालेर रोए। उनलाई लाग्यो, 'अब अभिनयबाहेक केही गर्दिनँ।'त्यो टेलिसिरियल सकिनेबित्तिकै फिल्म 'कागबेनी'मा तारा थकाली बन्ने अफर आयो। 'दलन'मा दलिएको अनुभव र एक्टर्स स्टुडियोमा अभिनय सिक्न थालिसकेकाले सहजै स्विकारिन्। मुस्ताङको मार्फामा गएर त्यहाँ ३० वर्षे युवती हेरिन्। तिनै युवतीभित्र आफूलाई समाहित गरिन्। 'रूपरङ र हाउभाउले थकाली युवती तारा त भएँ। नक्कली ताराले 'सक्कली जाडो' धान्न सकिनँ। मकलमा अँगालो हालेर बस्ने गर्थें। आफ्नो पालो आएपछि मात्रै सेटमा जान्थेँ,' उनले भनिन्। फिल्ममा 'तारा'को भूमिकामा उनी चम्किइन्। 'कागबेनी'ले उनलाई चम्कायो। 'मलाई एउटै कुराको डर थियो, कतै 'तारा' र 'काली' मिले कि?' एक दिन ललितपुरकै सानेपामा एकजना दर्शकले साथीलाई देखाएर भनिदिए, 'ओई हेर त, त्यो 'काली'जस्तै देखिने र 'तारा'जस्तै देखिने केटी त योङ रहिछ।' उनी ढुक्क भइन्। केही समयअघि फेरि उनी समलिंगीको भूमिकामा देखिइन्। दिया नामकी समलिंगीमा पनि उनी दुरुस्तै भेटेपछि चर्चा चल्यो, 'दिया त समलिंगी नै हो जस्तो छ।' पत्रकारले प्रश्नै गरे, 'स्वर पनि हस्की छ, नाम पनि दिया र अभिनय झन् दुरुस्त छ?' उनलाई स्पष्टीकरण दिँदै हैरान! 'भारतकी माधुरी र रेखाको पनि स्वर हस्की छ। म त्यो होइन कतिलाई भन्नु?' उनलाई गर्व लाग्यो, 'जसले जेसुके भने पनि यहाँ पनि पास भइछु।' अहिले मान्छेले उनलाई शहरको मध्यमवर्गीय परिवारमा काम गर्ने केटी 'कमला' देखिरहेका छन्। फिल्म 'साँघुरो'मा त्यो भूमिकामा देखेपछि धेरैले उनलाई 'गजबको काम' भनेका छन्। उनलाई नदेखेरै अरूले 'दिया त्यो पात्रमा कस्तो सुहाएको' भनेको पनि उनले लुकीलुकी सुनेकी छिन्। टोलकै एउटा दिदीको घरमा आउजाउ गर्नुले उनलाई कमला बन्न मद्दत गरेको हो। गाउँकी युवती शहरमा कसरी प्रस्तुत भइरहेकी छे भन्ने कुरा उनले त्यहाँ काम गर्नेबाटै जानिन्। 'फिल्ममा 'फिल्म हेर्न जाँदा' लगाएको कुर्ता पनि तिनै दिदीको हो,' उनले भनिन्, 'हाउभाउ मात्रै होइन, लुगाको कलर छनोट पनि उनीबाटै सिकेकी हुँ।'फरक स्वभावका पात्रमा समाहित भएकी दियालाई अब कस्तो पात्र भएर अभिनय गर्ने रहर छ त?'फिल्मको सामान्य सूत्रअनुसार बन्ने फिल्ममा हिरोसँग हात जोडेर डाँडामा नाँच्ने रहर छ,' दियाले आफ्नो इच्छा प्रकट गरिन्। अभिनय विविधतामा प्रज्ज्वलित भइरहेकी दिया यस्ता फिल्ममा कस्ती देखिएलिन्? Tweet Leaveacomment Message *
हामी रहरले अराजक बनेका होइनौँ : कवि हाङयुग अज्ञातकवि हाङयुग अज्ञात पचासको दशकको उत्तरार्धदेखि नेपाली कवितामा प्रवेश गरेका प्रयोगशील कवि हुन्। राजन मुकारुङ, उपेन्द्र सुब्बा र उनी मिलेर नश्लबोधसहितका प्रयोगात्मक कविता लेखनलाई नेपाली साहित्यमा गति दिए। अज्ञातले मूलतः...	मिस नेवाः मा २५ प्रतियोगी'एईसीसी ग्लोबल मिस नेवा ११३५' को अन्तिम स्पर्धाका लागि २५ जना युवती छानिएका छन्। राजधानीमा हालै सम्पन्न अडिसनमा ३४ आवेदकबाट मिस नेवाः को १० औं संस्करणका लागि २५ जना छनोट...	'हो, म असामाजिक प्राणी हुँ'कुनै बेला नेपाली फिल्म निखिल उप्रेतीमय थियो। फिल्म 'पिँजडा' मा सात तलाबाट हाम फाल्ने साहसी 'स्टन्ट'सहितको डेब्यूपछि उनी रातारात स्टार भए। बाइक उडाउनेदेखि उडेर किक हान्नेसम्मका स्टन्ट उनले नेपाली फिल्ममा...	शव ल्याउन महाभारतस्वदेशमा रोजगारी नपाएपछि विदेशिन बाध्य नेपाली कामदारको विदेशी भूमिमा मृत्यु हुँदा पनि शव नेपालसम्म आउन सकेको छैन।	'मिस्टर नेपालः गतिलो प्लेटफर्म'एक्सपोज नेपाल डटकमले हरेक वर्ष आयोजना गर्दै आएको मिस्टर नेपाल प्रतियोगिताको नयाँ संस्करण आगामी फागुनमा सम्पन्न हुँदै छ। स्टेज चढ्न चाहन्छ 'नेक्स्ट'कुरा वर्षदिनअघिको हो। नेपाली संगीत क्षेत्रमा नयाँ ब्यान्ड थपिएको थियो। यही कुराको जनाउ दिन ब्यान्डले आफूहरूको नामै 'अर्को' अर्थात् 'नेक्स्ट' राख्यो। 'खुब नाम सोचियो त्यो बेला,' ब्यान्डका संस्थापक सदस्य सुशान्त...	'पहिलो प्रेमपत्रले नै फेल खायो'रामचन्द्र अधिकारी (५९), कलाकार
गरिब किसान परिवारमा जन्मेको म। दुई कक्षासम्म मात्र पढ्न पाएँ। खेतीपातीमै सघाओस् भन्ने चाहनुहुन्थ्यो आमाबुबा। तर, मेरो मन खेतीतिर कहिल्यै गएन। सानैदेखि काम गरेर पैसा कमाउनुपर्छ भन्नेतिर...	पत्याउने कसले?अभिनेत्री महिमा सिलवाललाई चिन्नेले 'हट हिरोइन'कै रूपमा चिन्छन् किनभने उनलाई पर्दामा देख्नेले हट आइटम डान्सर र बोल्ड शहरिया युवतीका रूपमा देखेका छन्। त्यसैगरी गुगलमा उनको तस्बिर खोज्यो भने सर्ट्सका टाँक...	शुक्रबार	'शृंगारले आत्मविश्वास बढाउँछ'शृंगारमा प्रयोग हुने फेसियल प्रोडक्ट 'आस्टाबेरी'ले नेपाली बजारमा आफ्नो हिस्सा जमाउँदै आएको छ। भारतीय उत्पादन आस्टाबेरीको...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	बजेटपछि बिरामीजेठको धूप थेगिसाध्य थिएन। शीतल ताप्नेहरूले चौतारी खचाखच थियो। खेतमा डढेका मकै, सुक्दै गएका पानीका मुहान,...	एकताको लड्डुपछि फलामको च्यूराएकीकृत नेकपा माओवादीले आफ्नो पुरानो स्वरूपलाई ध्वस्त गरेर नयाँ नेकपा (माओवादी केन्द्र) मा रूपान्तरण भएको घोषणा...	भर्खरै...